Autodraw: यो के हो, यो के को लागी हो र को भाग लिन्छ | रचनात्मक अनलाइन
के तपाइँ कार्यक्रम थाहा छ? स्वतः निकाल्ने हो? यो पेंट जस्तै एक उपकरण हो कि तपाइँलाई थाहा हुन सक्छ, Microsoft बाट, तर एक अतिरिक्त थप संग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यो कार्यक्रम सबै भन्दा राम्रो डिजाइनरहरु को लागी एक ज्ञात छ। तर तपाइँलाई थाहा छ कि यो कसरी राम्रो संग प्रयोग गर्न को लागी।
यस कारण को लागी, हामी तल AutoDraw को बारे मा तपाइँ संग कुरा गर्न चाहन्छौं। तपाइँ जान्नुहुनेछ कि यो के हो, तपाइँ कार्यक्रम संग के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइदा र हानि यो छ र केहि अधिक विवरणहरु कि तपाइँ कुनै पनी तरिका मा याद गर्नुहुन्न। के हामी यसको लागी जाँदैछौं?
1 Autodraw के हो
3 Autodraw को कार्यहरु छन्
4 Autodraw दृष्टान्त को वास्तविक कलाकारहरु को हुन्
Autodraw के हो
पहिलो कुरा तपाइँ AutoDraw को बारे मा जान्नु पर्छ कि यो नजिक बाट Google संग सम्बन्धित छ, यति धेरै कि यो एक हो वेब अनुप्रयोग जसको उद्देश्य को लागी कसरी आकर्षित गर्न को लागी थाहा छैन मानिसहरुलाई मद्दत गर्न को लागी यो कम्पनी द्वारा शुरू गरीएको हो ताकि तपाइँको रचनाहरु लाई बनाइयो यदि उनीहरु पेशेवरहरु थिए।
उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक घोडा कोर्न को लागी सोधिन्छ। यदि तपाइँ कसरी आकर्षित गर्न थाहा छैन, तपाइँ तपाइँको सबै भन्दा राम्रो गर्न को लागी यो एक घोडा को सामान्य सिल्हूट छ, तर हामी अधिक को लागी सोध्न सक्दैनौं। यसको सट्टा, AutoDraw त्यो आधार चित्र को पहिचान गर्न को लागी र यो चित्र को रूप मा तपाइँ साँच्चै कब्जा गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै यो जनावर को धेरै विस्तृत र राम्रो संग चित्र को रूप मा अनुकूलन को लागी प्रयोग गर्दछ।
अन्य शब्दहरुमा, AutoDraw एउटा चित्र र paint्ग र ती चित्रहरु कि राम्रो गुणस्तर र परिणाम को अरु मा बनाईएको छ रूपान्तरण गर्न को लागी एक उपकरण हो, यस्तो तरीकाले कि कोहि मानिसहरुलाई सोच्न सक्छन् कि उनीहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी थाहा छ। यो गर्न को लागी, यो एक आधार को रूप मा वेक्टर चित्र को उपयोग गर्दछ, जो विकल्प हो कि यो तपाइँलाई दिनुहोस् कि तपाइँ उनीहरुलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि रंग, परिवर्तन गर्न को लागी पुन: डिजाइन वा मात्र तपाइँ प्रोजेक्ट मा प्रगति को लागी अनुकूलन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो हो सबै को लागी उपलब्ध छ र पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ। यस प्रकार, एक स्क्रिबल बाट तपाइँ एक पेशेवर ड्राइंग बिल्कुल नि: शुल्क हुन सक्छ। अब, तपाइँ विस्तृत छविहरु को लागी सोध्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यहाँ कुनै पनि छैनन्। तिनीहरू ज्यादातर एक एकल चरित्र को, अद्वितीय छविहरु मा आधारित छन्। यसको मतलब यो हैन कि तपाइँ एक पटक मा धेरै राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाइँ छवि चयन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र यसको आकार बदल्नुहोस् वा यसलाई एक अद्वितीय रचना बनाउन को लागी सार्नुहोस्।
के तपाइँ पहिले नै प्रयोग गर्न को लागी उत्सुक हुनुहुन्छ र हेर्नुहोस् AutoDraw के सक्षम छ? ठिक छ, हामी तपाइँलाई पर्खन को लागी जाँदै छैनौं, किनकि तल हामी तपाइँलाई यो संग के गर्न सक्छौं को एक सानो अनुमान लगाउन जाँदैछौं।
तपाइँलाई चाहिने पहिलो कुरा को लागी जानु छ AutoDraw आधिकारिक वेबसाइट। तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर मा केहि डाउनलोड गर्न को लागी छैन, तपाइँ मात्र वेब को उपयोग गर्न को लागी एक ब्राउजर को जरूरत छ।
एक पटक त्यहाँ तपाइँ उपकरण (तारा) सुरु गर्न को लागी संभावना पाउनुहुनेछ वा मेनु मा जानुहोस् जहाँ उनीहरु तपाइँलाई सिकाउँछन् कि लेखकहरु को हुन्, कसरी केहि चीजहरु गर्न वा AutoDraw को बारे मा।
हामी उपकरण आफै मा रुचि राख्नु भएको छ, जब तपाइँ पर्दा तारा गर्न को लागी क्लिक गर्नुहोस् एक खाली क्यानभास र बायाँ मा एक धेरै साधारण मेनू संग छवि कार्यक्रम को एक प्रकार को लागी परिवर्तन हुनेछ।
पूर्वनिर्धारित द्वारा ब्रश राखीनेछ, त्यसैले तपाइँ चित्रकला शुरू गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ चाहानुहुन्छ। जसरी तपाइँ गर्नुहुन्छ, माथिल्लो भाग मा उपकरण तपाइँ विकल्पहरु दिनेछ के रूप मा यो पहिचान गर्न को लागी तपाइँ चित्रकारी गरीरहनुभएको छ र तपाइँ चित्र को अनुमान लगाउन को लागी तपाइँ के चित्र को लागी हुन सक्छ। तपाइँ मात्र एक मा क्लिक गर्नु पर्छ र तपाइँको scribbles राम्रो गरीएको छवि को लागी आदान प्रदान गरिनेछ।
अन्तमा, तपाइँ फेरी कोर्न सक्नुहुन्छ, एक रचना बनाउन को लागी, वा त्यो छवि मा काम शुरू गर्न को लागी, उदाहरण को लागी यो रंग (र पृष्ठभूमि पनि), अन्य आंकडा (तपाइँ के कोर्नुहुन्छ वा अरु मा, आदि को आधार मा) बनाउन।
Autodraw को कार्यहरु छन्
AutoDraw मुख्य रूप मा एक चित्र को उपकरण को लागी जानिन्छ। तर सत्य यो हो कि यो मात्र चीज हो कि यो अनलाइन उपकरण तपाइँको लागी गर्न सक्दैन। त्यहाँ धेरै छ कि तपाइँ केहि मिनेट मा तपाइँको आफ्नै चित्र बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ सक्नुहुन्छ:
पाठ थप गर्नुहोस्। तपाइँ जति धेरै चाहानुहुन्छ जोड्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि तपाइँ खाता मा ठाउँ लिनु पर्छ। यसको अतिरिक्त, यो फन्ट र रंग को विभिन्न प्रकार मा राख्न सकिन्छ।
रंग जोड्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित द्वारा चित्र नीलो मा बाहिर आउनेछ, तर सच्चाई यो हो कि तपाइँ उनीहरुलाई अन्य रंगहरु मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पहिले नै चित्र को छ, तपाइँ र change परिवर्तन गर्न को लागी छ र त्यसपछि छवि चयन गर्न र यो परिवर्तन गर्न भरण बटन हिर्काउनु पर्छ।
जुम क्यानभास ठूलो बनाउन को लागी। यदि तपाइँ यसलाई कागज मा मात्र सानो बनाउन चाहानुहुन्छ, तल्लो दायाँ कुनामा तपाइँ एक छाया त्रिकोण छ कि तपाइँ कम वा धेरै जूम गर्न मद्दत गर्दछ।
अन्डु गर्नुहोस्। यदि तपाइँ फिर्ता जानुहुन्छ र तपाइँ पहिले गर्नुभएको काम लाई समाप्त गर्न को लागी आवश्यक छ।
डाउनलोड र साझा गर्नुहोस्। चित्र डाउनलोड गर्न को लागी, png ढाँचा मा, वा सामाजिक नेटवर्क मा साझा गर्नुहोस्। निस्सन्देह, दिमागमा राख्नुहोस् कि png छवि धेरै भारी हुने छ किनकि यो उच्च गुणवत्ता मा डाउनलोड हुनेछ। यदि तपाइँ यसलाई कम्प्रेस गर्न वा वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यसलाई एक छवि सम्पादन कार्यक्रम संग खोल्न को लागी र यसलाई अर्को ढाँचामा बचत गर्न वा इन्टरनेटमा अपलोड गर्न को लागी आकार परिवर्तन गर्न को लागी हुनेछ।
आकार जोड्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो डिजाइन को लागी ज्यामितीय आकारहरु जोड्न सक्नुहुन्छ।
बाहेक यी प्रकार्यहरु बाट, तपाइँ पनी अन्य मुख्य कुञ्जीपाटी बाट कीबोर्ड सर्टकट को माध्यम बाट पहुँच गर्न को लागी छ।
Autodraw दृष्टान्त को वास्तविक कलाकारहरु को हुन्
अब जब तपाइँ AutoDraw उपकरण जान्नुहुन्छ, तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्न कि लेखकहरु को हो कि यो सम्भव बनाउन को लागी तपाइँ चित्रहरु को उपयोग गर्न को लागी कि साँच्चै राम्रो गरीएको छ र मौलिक कि तपाइँले गर्नुभएको छ कि ताकि कार्यक्रम तपाइँ विकल्पहरु जान्दछन् कि के गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। तपाइँ चित्र कोर्दै हुनुहुन्छ? खैर हो, त्यहाँ मानिसहरु जो छविहरु को पछाडि छन्। र यी कलाकारहरु लाई पनि जान्ने अधिकार छ।
यस अवस्थामा, AutoDraw कलाकारहरुको एक सहयोगी समुदाय हो। सबै छविहरु कि बाहिर आउ एक क्रिएटिव कमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स अन्तर्गत डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
धेरै चित्रहरु तपाइँ AutoDraw मा देख्नुहुन्छ Selman डिजाइन, न्यूयोर्क मा एक डिजाइन स्टुडियो मा टीम को हो, तर त्यहाँ केहि छन् कि विभिन्न कलाकारहरु र सिमोन Noronha, Tori Hinn, Pei Liew, Erin Butner, जूलिया Melograna जस्तै डिजाइनरहरु द्वारा बनाईएको हो। , मेलिया Tandiono वा Hawraf।
निस्सन्देह, बिस्तारै बिस्तारै नयाँ चित्रहरु थपिदै छन्, र यी कलाकारहरु को वेबसाइट मा डाउनलोड गरीरहेछन्, दुबै आफैंलाई रचनाकारहरु लाई थाहा छ, र छविहरु को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी।
के तपाइँ AutoDraw को प्रयास गर्न को लागी हिम्मत गर्नुहुन्छ र समय बचाउनुहुन्छ जब केहि डिजाइनहरु कोर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » अटो ड्राइ
क्यालेन्डर छाप्नको लागी